राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्न : किन हजार जनाले काम गर्न मिल्ने एउटा कारखाना बनेन ? | सुदुरपश्चिम खबर
राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्न : किन हजार जनाले काम गर्न मिल्ने एउटा कारखाना बनेन ?
चितवन — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बहुदल आएको ३ दशकभन्दा बढी भए पनि देशका उद्योग कलकारखाना खुल्न नसकेको बताएका छन् ।
बहुदलपछि बनेका कुनै पनि सरकारले देशभित्र एक हजार जनाले एकै ठाउँ बसेर काम गर्न सक्ने कुनै एउटा उद्योग खोल्न नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार भरतपुरमा आयोजित सभामा बोल्दै लिङ्देनले भाषण र घोषणापत्रमा रोजगार सिर्जनाको कुरा गरे पनि काम भने नगरेको आरोप लगाए ।
‘३२ वर्ष एउटा देशका लागि लामो समय हो । यो समयमा रोजगार सिर्जना गर्न कल्ले के गरे ? ३२ वर्ष मौका पाउँदा पनि देशमा एक हजार जनाले एकै ठाउँ बसेर काम गर्न मिल्ने एउटो उद्योग छैन । यसो किन भयो ? फेरि चुनाव आउँदै छ । यो चुनावमा त एक पटक भए पनि फेरि उनीहरूलाई हेरौं नभन्नु होला,’ उनको अपिल थियो ।
सर्वसाधारणले बीउसमेत समयमा नपाउने अवस्था रहेको लिङ्देनको भनाइ थियो । ‘बाली लगाउने बेलामा बीउ खोज्दा नपाउने अवस्था छ । एक बोरा युरिया मलका लागि छटपटाउनु पर्दछ । कृषिप्रधान देश भन्ने तर पैसा तिरेर मल र बीउ किन्न नपाउने ?,’ लिङ्देनको प्रश्न थियो । रोजगारीका लागि लाखौं युवा विदेश जाने वातावरण दल र सरकारकै कारण उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले आउँदो चुनावमा राष्ट्रवादी उम्मेदवारहरुलाई मत दिन अपिल गरे । ‘२०७९ साल राष्ट्रवादीको जित होस् । तमाम राष्ट्रवादीहरु जुनसुकै ठाउँको जो भए पनि जात, सिद्धान्त र धर्म भए पनि राष्ट्रवादी नेताहरुको चुनावमा जित होस्,’ पाण्डेले भने । शुक्रबारको सभा विक्रम पाण्डेले चुनाव लड्दै आएको क्षेत्र चितवन–३ को केन्द्रीय वसपार्कमा आयोजना भएको थियो ।